Makore ekupedzisira mashanu emamwe madhiri makuru | Kubva kuLinux
Makore ekupedzisira mashanu emamwe madhiri makuru
Kunyangwe zita racho richiita kunge rinosarudzika, shamwari yedu Juan Carlos Ortiz akafunga anotevera madhiri seaya ari mune aya makore 5 apfuura ndakave ne chinzvimbo chinotungamira mune yeGNU / Linux nyika, kwete chete nekuda kwekuzivikanwa kwavo, asi zvakare nekuti ivo vari (kana vaive) heavyweights idzo zvishoma nezvishoma dzaichinja nyika yepenguin.
Iko kurongeka kweiyo distros kwakangoitika zvisina kujairika, haina kuitirwa kuve chinzvimbo chezviremera, ndoda kuisa imwe system pamusoro peimwe.
Mamwe akakosha madistros asina kuverengerwa nekuda kwekushaikwa kwenguva akasiiwa kunze kweiyi ongororo: Arch Linux, Debian, Slackware, Sabayon, PCLinuxOS, Gentoo, pakati pevamwe. Zvichida gare gare tinozovasanganisira muchikamu chechipiri chechinyorwa chino.
3 Tsvuku ngowani Enterprise Linux (RHEL)
2007: Ubuntu 7.04 Feisty Fawn yakaburitswa, yekutanga nerudzi rweAsia mutauro rutsigiro, uye 7.10 Gutsy Gibbon. Ubuntu Inokunda InfoWorld Bossie Mubairo weYakanakisa Open Source Client OS; kufarirwa kwayo kunowedzera muGNU / Linux nyika uye inotanga kumira senyika inokura nekukurumidza.
2008: Ubuntu 8.04 Hardy Heron (LTS) uye 8.10 Inotya Ibex yakaburitswa. PCWorld mitengo Ubuntu se "yakanakisa kugoverwa kweLinux kunowanikwa mazuva ano"
2009: Kuburitswa kweUbuntu 9.04 Jaunty Jackalop iyo inowedzera ext4 sefaira sisitimu yekumisikidza uye rutsigiro rwemaARM processor, uye 9.10 Karmic Koala, iyo yakatangwa iyo Ubuntu Software Center, iyo inobvumidza mapakeji ese kutarisirwa zvakanyanya pakati. Idzi shanduro dzichawedzera huwandu hwevashandisi veUbuntu, kuchiunza zvakanyanya padyo nenzvimbo yekudyiwa kwakakurumbira uye kuve nemamirioni gumi nematanhatu evashandisi vanoshanda vane mwero wekukura wakakwira kupfuura chero kumwe kugovera. Google inoratidza kuti vanopfuura zviuru makumi maviri vashandi vanoshandisa vhezheni yakashandurwa yeUbuntu pabasa ravo rezuva nezuva. Iyo National Gendarmerie yeItari inoponesa 13% yeIT bhajeti nekuchinjisa zviuru zvishanu zvekushandira kuUbuntu; KuMacedonia, iyo Ministry of Dzidzo neSainzi yakaendesa anopfuura 20.000 makomputa ane Ubuntu kuzvikoro.
2010: Ubuntu 10.04 Lucid Lynx (LTS) yakaburitswa, iyo yaitsvaga kudzikisa nguva dzebhutsu, kugadzira patsva Software Center, uye nekuvandudza kugadzikana kwesisitimu. Uye zvakare, iyo yekumisikidza yakagadziridzwa zvakanyanya, ichiwedzera masiraidhi. Kuburitswa kweshanduro 10.10 Maveric Meerkat yakawedzera btrfs kune mafaera masisitimu uye yakagadzirisa dzimwe nyaya dzekushandisa nemabhugi eUniity, asi zvaizotora nguva yakareba kuti nharaunda ijaire kushandiswa kwayo. Hofisi suite kubva kuOpenOffice inoshandurwa kuita LibreOffice.
2011: Ubuntu 11.04 Natty Narwhal uye 11.10 Oneiric Ocelote yakaburitswa. Kubatana kunowedzerwa senge yakasarudzika GUI nharaunda, kutsiva GNOME, iyo inokonzeresa kukosha kubuda kwevashandisi. Iko kuiswa kwezvishandiso zvakavakirwa muQt uye kuiswa kwepakati pekugadziriswa kweQt neGTK kunoziviswa. Shanduro dzinoverengeka dzinobviswa, kuchisiya chete zita rekuti 'Ubuntu' rekushandisa pamhando dzese dzemakomputa, uye 'Ubuntu Server' yekushandisa pane maseva. Kubatanidzwa kweUbuntu pamhando dzese dzemapiritsi, materevhizheni, nhare uye zvimwe zvishandiso zvakaziviswa kune vhezheni 14.04 (Kubvumbi 2014). Huwandu hwevashandisi zvinoenderana neCannonical ingangoita mamirioni makumi maviri. Zvakadaro, Ubuntu inorasikirwa nenzvimbo yepamusoro munzvimbo yeDrowrowatch kuLinux Mint kekutanga mumakore. Ubuntu Server inokwira kunzvimbo yechina pakati pekushandiswa kweLinux kunoshandiswa kwemaseva.
2012: Ubuntu 12.04 Precise Pangolin (LTS) yakaburitswa. Ubuntu TV inounzwa kuCES, ichibvumira manejimendi yezviri mukati nemasevhisi. Yakaziviswa 'Ubuntu yeApple' iyo inobvumidza iwe kumhanya iyo Ubuntu desktop kubva kune chero Android smartphone. Gakava pamusoro peiyo UEFI system inoitwa neMicrosoft yeWindows 8, Cannonical inosarudza kugadzira kiyi yayo seimwe nzira, iyo inofanirwa kusatenderwa neFSF. Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal budiriro inotanga nekuwanikwa kweiyo yekutanga Alpha shanduro.
Analysis: Pasina kupokana, Ubuntu yave iri yakanyanya mareferenzi ekukura kweiyo GNU / Linux nyika. Pasina chinhu chekugodora Windows, kuzhinji kwekutama kwevashandisi vekare veRedmond OS vakapfuura neCannonical distro vasina vepakati uye kukura kwayo pamusoro pemakore zvakare chiratidzo chekuti vazhinji uye vazhinji vashandisi vanokurudzirwa kuziva kuti Linux zvakare iri nyika iyo inogona kuzadzisa zvaunoda.
Nekufamba kwenguva Ubuntu kwave kuvandudza, ichiwedzera rutsigiro rwehardware, ichigadzira maturusi ayo anofambisa manejimendi, kupuruzira iyo mifananidzo, ichiwedzera musika wayo kune mamwe matunhu, ichigadzira nharaunda ine simba uye yakakura. Zvichida kukundikana kwayo kukuru kwauya nekuitwa kweUbatana, nharaunda yakashamisa vazhinji nezvikara zvakawanda pakutanga uye zvakakonzera "kubuda" mukufarira dzimwe nzira. Vamwe vashandisi vatora kufarira Kubatana kana kushandura graphical nharaunda.
Chii chekutarisira mune ramangwana? Kuwedzeredzwa kune mimwe misika iyo Cannonical inotarisira kuti igovaniswe kunogona kudzosera bhalanzi kuita Ubuntu zvakare kufarira, kunyangwe nhasi yatove nenhamba hombe yevashandisi. Zvese izvi zvinoenderana nekuongorora mhedzisiro inokonzereswa nesarudzo yega yega nerutsigiro renharaunda yako.
2007: Kuburitswa kweshanduro 2.2 "Bianca", 3.0 "Cassandra", 3.1 "Celena" uye 4.0 "Daryna", iyo yekupedzisira iyo inowedzera kekutanga KDE seimwe nzira yeGNOME nemapakeji ayo ese, pamwe nematurusi akakosha akati wandei. senge mintUpdate uye mintDesktop uye inotsanangura desktop ichave iri Mint standard kubva zvino zvichienda mberi, kubheja pakushandisa kwemushandisi. Cassandra anowedzera yakakurumbira "cube" mhedzisiro kutenderera pakati pematafura.
2008: Kuvhurwa kweshanduro 5 "Elyssa" uye 6 "Felicia". Kufamba kwekuvandudza kunoshandurwa kuita maviri anoburitswa pagore, sezvakaita Ubuntu, iyo base Linux Mint kugovera. Elyssa ndiye aive wekutanga kuwedzera mitauro yakawanda, rutsigiro rwema x86_64 maumbirwo uye, iri LTS, ichave iri shanduro inoshandiswa zvakanyanya munharaunda munharaunda kwemakore.
2009: Kuvhurwa kweshanduro 7 «Gloria» uye 8 «Helena». Gloria anounza ext4 rutsigiro uye akakosha emifananidzo shanduko, iyo yaizobatsira zvakanyanya kuzvipatsanura pachayo kubva kuUbuntu uye kuratidza yakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika distro. Helena inounza kuvandudzwa kunoshamisa kweGDM mintUpdate, mintInstall, mintUpload, mintBachup uye Software Manager, zvishandiso izvo nekufamba kwenguva zvingave zviri simba mukutanga kwega kwega. Grub2 uye OEM vhezheni inowedzerwawo
2010: Kuvhurwa kweshanduro 9 "Isadora" LTS uye 10 "Julia". LMDE 201012 inoburitswa, inotenderera-yakaburitsa-based Debian-based Linux Mint 100% inoenderana neDebian asi kwete neiyo huru Mint edition. Huwandu hwevashandisi kubva kune kumwe kugovera kunowedzera padanho hombe, Mint inotanga kuwana mukurumbira. Kuvhurwa kweshanduro nemamwe ma desktops kuenda kuGNOME, senge KDE, XFCE kana Fluxbox, inoziviswa zviri pamutemo (kunyangwe pasati pave ne "nharaunda" shanduro dzenzvimbo idzi)
2011: Kuburitswa kweshanduro 11 "Katya", iyo yakatanga kutyisidzirwa nekusunungurwa kweGNOME 3; zvinosarudzwa kuramba uchishandisa GNOME 2 asi zvinokurudzirwa kutsvaga imwe nzira inobvumidza kuchengetedza hunhu hwayo. OpenOffice inotsiviwa ne LibreOffice. Mukupedzisira Katya anozove mumwe weanogoneswa kwazvo munhoroondo yeMint, budiriro isingagoni kupfuurwa nemutsivi wayo. Shanduro 5 Elyssa anouya kumagumo ehupenyu hwake seLTS. Pakupera kwegore 12 "Lisa" yaburitswa, iyo inowedzera MATE senge graphical nharaunda kutsiva GNOME 3. Kuvhurwa kweLMDE 201104 uye 201109. Linux Mint timu yekuvandudza inovhura zviri pamutemo Cinnamon, forogo yeGNOME 2 iyo ichave zvakare inowanikwa kune kumwe kugovera senge Fedora, Ubuntu, OpenSUSE kana CentOS pakati pevamwe. Linux Mint inotsiva Ubuntu muDrawrowatch yemunhu peji rekutarisa masosi, zvichisimbisa kuwedzera kwaMint; inguva yekutanga mumakore kuti Ubuntu kurasikirwa nenzvimbo yekutanga
2012: Kuvhurwa kweshanduro 13 "Maya" uye LMDE 201204. Mukubatana neCompuLab, MintBox inotangwa, komputa diki saizi yakafanana neyemodem uye inosanganisira Linux Mint sisitimu yekushandisa. Maya inosanganisira MDM, kutsiva GDM semaneja wekupinda; Mwedzi mumwe mushure mekuvhurwa kwayo, inotsanangurwa nemasangano akasiyana se "chimwe chezvakanakisa zvakarongeka uye zvinoshanda munzvimbo dzeGNU / Linux." Iko kuvandudzwa kweshanduro 14 kwakarongwa, isina kodhi zita panguva ino uye zvichibva pane inotevera Ubuntu 12.10 kuburitswa
Analysis: Linux Mint inomiririra muenzaniso wakanaka wekuti distro inogona sei kubva pakuva imwe yeiyo "murwi" kusvika pakuve pamusoro pezvakakurumbira zvekugovera, pasina kukanganwa kuti pakutanga Mint yaingova peji rewebhu! Chave chave chiri chibereko chakanyanyisa makore mashanu kune distro iyo iri diki, iyo yekutanga kuburitswa yaive Ada, vhezheni 5 muna 1.0. Kunyange vamwe vachati mamiriro azvino eMint ari nekuda kwekutama kwevashandisi kubva kuUbuntu nekuda kwe kurambwa kubva kuYe, ichi hachisi chokwadi chechokwadi, sezvo zvaizokanganisa Mint.
Vashandisi vakasimbisa Mint kwemakore mashoma ekuisirwa multimedia uye java codecs, isinganetsi LiveCD, huwandu hwayo hwayo maturusi uye zvakare graphical nharaunda iyo yagara yakanangana nekureruka kwekushandisa. Pakutanga ndakashandisa GNOME, uye kana iyo yechitatu vhezheni yenharaunda iyi yaburitswa, kwakasarudzwa kuchengeta Cinnamon neMATE, maforogo maviri anobvumidza kukosha kweGNOME kuchengetedzwa neimwe nzira mune yayo yechipiri vhezheni. Idzi sarudzo dzese dzakabudirira kunyanya nekuti ivo vanogadzira vanove nechokwadi chekuti vane kutaurirana kwakanaka nevashandisi vavo, izvo zvinogara zviri pamwe chete.
Kuenda kumberi, Mint inofanirwa kutevedzera yayo yekutanga murau: chengetedza yayo distro yakapusa uye ine simba uye vashandisi vayo vafare. Izvi ndozvazvinofanira kuita chinzvimbo chazvino, uye kunyangwe isina chiyero chekukura nekukasira seUbuntu, kusimudzira kwekuparadzirwa kwayo hakuna chinhu chekugodora kuCannonical system.
Tsvuku ngowani Enterprise Linux (RHEL)
2007: Shanduro 5. Yaburitswa. Jim Whitehurst Anonzi Red Hat Mutungamiri uye CEO; Matthew Szulik anoenderera seMutungamiri weRed Hat. Kwegore rechina rakateedzana Red Hat inonzi Inonyanya Kuvimbika Software Vendor. RHEL 5.1 inosunungurwa
2008: RHEL 5 Inokunda Goridhe seChigadzirwa cheGore kubva KutsvagaEnterpriseLinux.com muchikamu cheLinux Server Distributions yehutungamiriri hwayo mukuona. Red Hat inosanganisirwa mune yeForbes runyorwa rwemakambani makumi maviri neshanu ari kukura nekukurumidza. Chiteshi Insider Mazita Red Hat Enterprise Linux Chigadzirwa cheGore 25. RHEL 2008 Kuburitswa
2009: RHEL 5.3 yakaburitswa. RHEL 5.4 inoburitswa, inosanganisira kernel-based virtual muchina (KVM) tekinoroji yekuona pamwe neXen virtualization tekinoroji kekutanga. Kwenguva yekutanga RHEL neWindows zvinogona kuendeswa pamwechete kuburikidza nehunyanzvi, semugadziri kana semushanyi, nerutsigiro ruzere kubva kumakambani ese ari maviri.
2010: Kuburitswa kweshanduro 6, iyo inobatsira kufunga nezveramangwana umo masevhisi akaisirwa mukati megore. Iyo Red Hat Cloud Access chishandiso inogonesa chero mushandisi kuwedzera kwavo kunyorera kweRHEL kuCloud zviri nyore uye nyore.
2011: Kuvhurwa kweshanduro 6.1 uye 6.2, kuzadzikisa marekisheni ekugadzirisa uye kuenderana nemabhizimusi eSAP zvigadzirwa. 2.5 mamirioni RHEL kunyoreswa kwasvika
2012: Red Hat inozivisa kuti ichawedzera rutsigiro rweRHEL 5 ne6 kubva pamakore manomwe kusvika gumi. Kukakavara pamusoro peiyo UEFI system inoitwa neMicrosoft yeWindows 7, Red Hat neCannonical vanoita sarudzo dzakasiyana.
AnalysisChinzvimbo cheRed Hat mumakomputa musika chinongoyevedza, asi kure nekuzvikudza uye kuzvitutumadza seMicrosoft, Red Hat inowana chinzvimbo ichi kuburikidza nemhando yepamusoro yezvigadzirwa uye nerutsigiro rwayo runopa vatengi vayo. Hatikwanise kana kufungidzira zvese zvitupa zvemhando yepamusoro uye marekodhi akachengetwa nekambani iyi, uyezve kushoma nhamba yevatengi yainayo (kungodaidza zita rekuti NASA uye IBM zvakatikwanira) Avo vedu vasingazomboshandisa RHEL vanogona kunge vaine pfungwa pfupi Zvese zvinomiririra, asi kure nekusahadzika kupi kuri kugovaniswa kwemhando yepamusoro ine rutsigiro rwemunhu, kusangana nezvimwe zvigadzirwa zvekuwana uye nehurongwa hweakanakisa munyika yeLinux.
Zvichida kukura kukuru kweRHEL kwatinoona muchikamu chebhizinesi, nekuti iri munzvimbo ino umo chengetedzo nekusimba zvinonyanya kukosha. Iyo indasitiri yedesktop inogona kusakura nekukwakuka uye miganhu, asi Red Hat ichaenderera ichipa RHEL nekuenderera kwayo kuri kuenderera.
2007: Nekuburitswa kweFedora 7 "Mwedzi", iyo Core uye yekuwedzera zvinyorwa zvinosangana, pamwechete nechishandiso chitsva kubata mapakeji avo. MunaNovember vhezheni 8 "Werewolf" inoburitswa, iine zvinhu zvitsva zvinowedzerwa sekuisanganisira Iced Tea, Codec Buddy uye Pulse Audio; Fedora inova iyo yekutanga kugovera kuve nePulse Audio inogoneswa nekutadza.
2008: Fedora 9 "Sarufa" inopa hukuru maficha uye nharaunda zvinowedzera. Fedora 10 «Cambridge» inounza sechinhu chayo chikuru Plymouth bootloader, ichitsiva RHGB (Red Hat Graphical Boot)
2009: Vhezheni 11 "Leonidas" inounza kuvandudzwa kukuru kusisitimu yekutanga uye kudzima (masekondi makumi maviri kumusoro kumusoro kune yekuisa mushandisi), rutsigiro rwekugonesa kweminwe, yum uye zvigadziriso zvepakeji, uye rutsigiro rwe ext20 faira masisitimu. Fedora 4 "Constantine" inowedzera hombe kuvandudza kune grub iyo inobvumira ext12 zvikamu kuti zvizivikanwe, kunyangwe rutsigiro urwu rwakave rwakaverengerwa, grub yakagadzira diki ext4 / ext2 chikamu kana ichiisa system. Tsigiro izere yemitauro yeAsia inowedzerwawo.
2010: Fedora 13 "Goddard" inosanganisa iyo RPM yekuvandudza iyo inovandudza manejimendi manejimendi inosvika kusvika pa30%, 3D kugadzirisa kwemakadhi eNvidia. Vhezheni 14 "Laughlin" inoburitswa kekutanga muAmazon EC2 gore, chiitiko icho shanduro dzazvino dzinoramba dzichichengeta, dzinosanganisira zvidzoreso kumazhinji mapakeji ebudiriro uye maraibhurari ehurongwa.
2011: Kuburitswa kwaFedora 15 "Lovelock" kunosanganisira iyo hombe nhamba yezvigadziriso mumakore mazhinji, ichiwana iko kuwedzera kukuru muhuwandu hwevashandisi uye yakanakisa midhiya ratings. Mahara Hofisi inosanganisirwa kutsiva Open Hofisi, maturusi ehurongwa, kugadzirisa kwenzvimbo dzemifananidzo dzinosanganisira XFCE neLXDE, kugadzirisa mune system faira system uye nekukurumidza. Fedora 16 "Verne" inowedzera maturusi ekushanda mugore, zvigadziriso zvegubhu 2 uye HAL yabviswa, inogadziridza maturusi ekuvandudza uye inovandudza kernel ku3.1.0. Webhu saiti inonzi "Bvunza Fedora" inotangwa, iyo inoshanda senzvimbo yekuisa pakati mibvunzo uye kusahadzika kubva munharaunda uye iyo inogona kupindurwa nevashandisi ivo pachavo.
2012: Iyo yazvino vhezheni yakaburitswa ndeye "Beefy Chishamiso" 17, ine maficha senge kernel 3.4.1, GNOME 3.4, KDE 4.8, kuvandudzwa kweNetwork Managaer, kuwiriraniswa nekabatwa skrini uye kutsiviwa kweptable ne firewalld. Shanduro dzichiri nerutsigiro ndedzegumi neshanu; Fedora 16 "Spherical Cow" iri kutarisirwa kuburitswa munaMbudzi gore rino
Analysis: Chirevo chaFedora ndechekuti "Rusununguko. Hushamwari. Zvimiro ”, uye inonyatso kusangana neiyi nzvimbo. Kubva pane iyo kodhi kodhi yakapihwa neRed Hat, Fedora inopa nharaunda inoshanda sisitimu iyo inotibvumidza isu kunakidzwa nehunhu hwemahara software, kusangana nehukuru uye inonakidza nharaunda, uye kuve nematurusi mazhinji aripo ekuti zvive nyore kwatiri kushandisa PC yedu.
Zvichida kukura kweFedora hakuna kuputika nekukurumidza sekumwe kugovera, asi kukura kwayo hakumire, inoramba ichivandudza nekuburitswa kwega kwega uye ichienderera mberi kutora, mushure memakore mapfumbamwe enhoroondo, nzvimbo pakati pekuparadzirwa kwakakosha muGNU nyika / Linux. Imwe yemapoinzi anonyanya kushoropodzwa nevashandisi vezvimwe zvekuparadzanisa ipfupi kwazvo rutsigiro rwunopihwa kune yega vhezheni uye dzimwe shanduko dzinopihwa iyo systemystem pakati peimwe kuburitswa neimwe, kunyangwe izvi zvaitika kakawanda. manejimendi.
Maonero angu ndeekuti Fedora akaberekerwa kugara: kuve chirongwa chemunharaunda uye uchipa kuwanikwa kuti usarudze pakati pezvakawanda maSpins, Mafomati uye maDesktops zvine chokwadi chekuti kukura kwayo kuchave kukuru uye kukuru. Sezvo makore anopfuura, ichaenderera mberi iine budiriro iyo yawakaunganidza pamusoro pemakore.
2007: Mandriva 2007 (iyo yakaburitswa mukupera kwa2006) inokwezva mafungu evashandisi vatsva, ichiwedzera mukurumbira wayo, uye inosanganisira maficha matsva senge mafomati ekuparadzira USB (Mandriva Flash) uye LiveCD. Shanduro 2007.1 ndiyo yekutanga "Chitubu", iyo inoshandura iyo yekuvandudza kutenderera kuita mwedzi mitanhatu; Compiz naBeryl, MandrivaUpdate, MandrivaOnline, uye DrakRPM inosanganisirwa. Mandriva 6 inowedzera nyowani yeWindows / Linux yekufambisa chishandiso: transfugedrake.
2008: Shanduro 2008.1 inovandudza rutsigiro urwu nekubatsira Windows Vista kutama. Kuburitswa kwa2009.0 kunowedzera rutsigiro rwehardware uye kusangana kwakadzika neKDE neLXDE. Iyi neinotevera yakavhoterwa akanakisa enhoroondo dudziro nenharaunda.
2009: Mandriva 2009.1 inowedzera ext4 rutsigiro uye nyowani Speedbot tekinoroji. Iyo 2010 vhezheni, inonzi Adelie, inouya izere nekuvandudzwa uye shanduko: hukuru kuchengetedzeka, kuenderana nenzvimbo dzakajeka, akaundi account inowedzerwa, kusangana kukuru pamwe neLinux Mobile vhezheni, kugadzirisa mu URPM uye urpmi.
2010: Kuburitswa kweshanduro 2010.1 ("Farman") hakuunzi kunatsiridza kwakakosha, kungo gadziriso yepakeji. Iyo yekuvandudza kutenderera yakatemwa uye inodzokera kune 1 gore, ichimisa iyo distro uye kuburitsa inogadziridza chete. Runyerekupe rwekutengeswa kweMandriva kunoisa pangozi basa revashandi varo (kunyanya rakavakirwa muBrazil neFrance) uye rinokanda nharaunda mugore rekusava nechokwadi; mamiriro acho anodzikama nekuuya kwevatengesi vatsva. Vamwe vanogadzira vanopatsanura uye vanotanga kuvandudza Mageia padhuze nevashandisi vane hanya nezveramangwana revakatangira.
2011: Yekutanga RC yeshanduro 2011.0 ("Hydrogen") inodzosera tariro kuna Mandriva, uye yekupedzisira vhezheni inounza zvinhu zvitsva pakati payo MandrivaSync inomira, sevhisi yekuwiriranisa data. Pakupera kwegore iyo kambani inozviwana iri mune yakakomba mamiriro ehupfumi, uko varimi vanotyisidzira kubvisa rutsigiro rwemari kana mhinduro dzikasawanikwa uye kungangoita kubhuroka kana kutengeswa kune wakakwira kukwikwidza kuri pamberi.
2012: Mushure mekuverengeka "kwekupedzisira" nevashambadzi kubhuroka kwakamiswa. vamwe vekare-vagadziri vanobatana nekugadzira forogo nyowani yeMandriva, ROSA Marathon 2012. Kunyangwe paine mwenje mutsva, vamwe vashandi vanosiya basa nekuda kwekufa kweEdge-IT, inova chikamu chakashandisa vazhinji vevagadziri. Kudzokororwazve kweMandriva kunotenderwa, hwaro hunogadzirwa uye budiriro inopfuudzwa kunharaunda. Iyo "Tech Preview" yeiyo 2012 vhezheni yakatangwa, inonzi "Bernie Lomax". Iyo hwaro inotangisa yakavhurika online ongororo kusarudza zita idzva rekugovera.
Analysis: Mandriva's innovation seyesimba, inoshanda uye mushandisi-inoshamwaridzika distro yaitaridzika kunge yasara kumashure, uye kwete chaizvo nekuda kwekudzikiswa kwemhando, asi nekuti tarisiro inoita kunge iri pamatambudziko aakatarisana nawo uye anoramba achitarisana nawo. Makore apfuura zvakazivikanwa sechinhu chisingazivikanwe cheimwe yepamusoro gumi yezvakanakisa zvekuparadzirwa kweLinux; nhasi chinoita kunge chiri kudzikira mugungwa remafungu ari kuchinja. Mandriva aiziva maitiro ekuvandudza kana zvasvika pakutsigirwa kwehardware, uye chikamu chikuru chekukwezva kwake kuri kuva neyakagadzirirwa zvakanaka distro, ine akasiyana siyana ma software uye maturusi uye yakasimba yakasimba zvachose inopesana nemamiriro ayo emari.
Handover webudiriro kunharaunda inogona kunyatso kugadzirisa mamiriro acho ezvinhu. Nekudaro, panguva yayo yekusagadzikana, vashandisi vazhinji vakatamira kune kumwe kugovera vachitsvaga kuenderera mberi kwekuvandudza, uye kudzoreredza kwavo harizove basa riri nyore kupihwa dzimwe nzira dzakanaka dziripo nhasi. Parizvino, gore rino rinotsvaga kudzoreredza kubwinya kweshanduro dza2009 uye 2009.1, pamwe akakwirira mapoinzi munhoroondo yeMandriva. Kunyangwe izvi zvichizadzikiswa kana kuti kwete zvichatsamira pakurongeka kwenzanga nenheyo nyowani uye kuti kusagadzikana uko kwakakomberedza kugovera kukuru uku kunogona kugadziriswa.
2010: Muna Gumiguru, boka revaimbove-Mandriva vanogadzira nevamwe vashandisi vakazivisa kuumbwa kweMageia foundation, panguva imwechete apo nhau dzekubviswa kweEdge-IT dzakaziviswa. Boka idzva rakazivisa kugadzirwa kweiyo distro yezita rimwe chete uye rakati "ivo vaisada kuve vanovimba kwete nekuchinja kwehupfumi kana nemafambisirwo ehurongwa pasina tsananguro kubva kukambani." Muenzaniso wakasimba webasa renharaunda nekusimudzira zvinotsanangurwa.
2011- Mageia 2011 inoburitswa munaJune 1, iine nhamba dzisina kujairika dzekuodha dze newbie distro Iwe unosimbisa nharaunda yakasimba uye iwe unowana yakawanda mhinduro kubva kune vashandisi. Iyo 9-mwedzi yekuvandudza kutenderera inosimbiswa ne18-mwedzi rutsigiro yeimwe vhezheni
2012: Shanduro dzinoverengeka dzeAlfa neBeta dzechipiri dzinoburitswa. Mushure mekunge Mandriva adzore kutonga munharaunda, Mageia anopiwa rubatsiro rwake uye mukana wekuti mushandirapamwe ubatanidzwe. Vagadziri veMageia vanoramba kukoka uye mazuva mashoma gare gare kuvhurwa kwekupedzisira kweMageia 2 kunoitwa, kuchipa kugadzikana kukuru uye kudarika mapakeji zviuru gumi muzvinyorwa. Zvirongwa zveMageia 10.000 zvakatsanangurwa.
AnalysisKunyangwe aine makore matatu chete enhoroondo, Mageia akawana nzvimbo yayo pane ino runyorwa. Kunyanya nekuda kwemhirizhonga yakagadzirwa nekuve iye "nekukurumidza" mutsivi waMandriva munguva apo zvinonzi distro yaive munjodzi nekuda kwematambudziko akasiyana siyana. Kugara kunze kwekukonana uku, iyo Mageia Foundation yakanangana nekuvandudza iyo yayo system iyo yaizove yakavhurika zvachose kunharaunda, izvo Mandriva zvaizopedzisira zvave kupenga kuita kuti ararame.
Mageia kugovera kwakanaka kwazvo. Yechipiri vhezheni yakagadzirisa matambudziko akati wandei aive nedangwe, uye zvakare yakawedzera rondedzero yesoftware mune ayo ekuchengetedza uye huwandu hwesoftware inotsigirwa; Kunyangwe isiri yega graphical nharaunda inowanikwa, KDE inokodzera zvakakwana neMageia, ichipa chinonakidza chiitiko chevashandisi.
Zvese zvinoratidza kuti Mageia ichaenderera nekukwezva vashandisi vatsva uye inotarisa pakuvandudza kugovaniswa kwayo, iyo kunyangwe isina kukwana, yakashandisa zvakanaka nguva yakaipa yaMandriva yekuwedzera zvakanyanya huwandu hwevashandisi.
2007: Kuburitswa munaGumiguru vhezheni 10.3 yakatarisana nekudzokororwa kwepakeji yekurodha (kuwedzera rutsigiro rwe1-Dzvanya Kuisa), rutsigiro rwepamutemo rweFluendo MP3 uye nekuvandudza munguva dzekukanda.
2008: Vhezheni 11.0 inotanga kuwedzera akati wandei ekudzivirira sarudzo uye akasiyana desktops; kusimudzira kunoitwa maererano nesisitimu yekumhanya. OpenSUSE 11.1 inowanikwa pakupera kwegore, mushure meizvozvo kuburitswa kwaizomiswa uye nguva yaizopinda panongoburitswa zvigadziriso.
2009: MunaNovember, vhezheni 11.2 yakazoburitswa, iyo inowedzera kunatsiridza kwakakosha senge rutsigiro rwe ext4 uye PowerPC, KDE senzvimbo huru yekuratidzira, ichisiya GNOME senge sarudzo, mukana wekurodha pamusoro peneti (faira re150 MB rinobvumira kurodha pasi zororo rekuisa mafaera kuburikidza neinternet).
2010: OpenSUSE 11.3 yakaburitswa muna Chikunguru, yaive vhezheni inozivikanwa kwazvo pakati pevashandisi uye iri pakati peshanduro dzakakosheswa kwazvo nenzira dzekomputa. Kuenderana kweNetbook kwakagadziridzwa, 2 akareruka desktop desktop akawedzera (Meego paOpenSUSE uye KDE Plasma Netbook Workspace), btrfs yekuyedza uye rutsigiro rweJFS, nharembozha rutsigiro, kuwedzerwa kweseva uye maturusi ekuvandudza, kugadzirisa kwenzvimbo ina dzemifananidzo (KDE, GNOME, XFCE, LXDE), pamwe newedzidzo vhezheni.
2011: Kuburitswa kweshanduro 11.4, ine zvigadziriso zvepakeji pamwe nekuvandudzwa kudiki, uye vhezheni 12.1, iyo isina kuzadzikisa budiriro yeaizotangira. Kunatsiridzwa mune yazvino vhezheni kwaisanganisira kutsiva kweOpen Office neLibre Hofisi, KDE Plasma paKDE, WebYaST uye OwnCloud yekutungamira netiweki nekukwenenzvera kweYaST GUI paKDE.
2012: Kuburitswa kweshanduro 12.2 kunonoka uye kunokonzera kusagutsikana munharaunda. Kunyangwe izvi, huwandu hwekuburitswa kweshanduro 12.1 hunowedzera, huwandu hwemapakeji muzvitoro zvinowedzera. Iyo RC ye12.2 iripo parizvino
Analysis: Semushandisi weOpenSUSE ini ndaona zvese kunaka uye kukanganisa kweichi kugovera uye nhasi ndinozviwana ndine yakakwana uye ine hushamwari system yekushandisa. Zvisinei, izvi zvidiki zvinogumbura zviri kutora nzvimbo zvinoratidza kuti budiriro inoita kunge yamira, kunyange hazvo ichi chisiri chokwadi chose.
Zvirokwazvo OpenSUSE yawana chinzvimbo chekuremekedza muGNU / Linux nyika yekuratidzira kusimudzira kwakanaka kunoonekwa mune yakachengeteka uye yakasimba system pasina kuregeredza usability kana kupora nenharaunda yekufananidzira, uye ichi chave chimwe chikonzero nei chakwezva vashandisi vazhinji. Nekuburitsa dzimwe nzira dzakawanda dzekushandisa kuburikidza neakasiyana mafomati ekuvhura, akasiyana desktops, iyo Fekitori uye Tumbleweed matavi uye kunyangwe SUSE Studio, mushandisi ane mikana yese yekuvaka kugovera kwavo sezvavanoda zvakanyanya. Iyi rusununguko rwekushandisa, iyo isingaonekwe mumazhinji ma distros, inokurudzira kukura kwemazuva ese kwevashandisi vayo.
Sekupfupisa, kunyangwe isina kumbove iko kugovera kukuru, OpenSUSE yakagara iri kumberi uye ndeumwe muenzaniso wekubudirira uye simba ratino kupihwa nenyika yeGNU / Linux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Makore ekupedzisira mashanu emamwe madhiri makuru
Jaume Torres Ortega akadaro
sechitsva kuLinux ndanga ndichishandisa kubuntu kweinenge mwedzi mitatu uye ndiri kufunga kuchinjira kune imwe disibucion, unondipa zano rei?
Pindura Jaume Torres Ortega
Juan Pablo Jaramillo Pineda akadaro
Zvizere bvumirana. Sei Debian GNU / Linux isiri kuita? Oo
Pindura Juan Pablo Jaramillo Pineda
Josue Aquino akadaro
uye debian uye arch? 😐
Arch haina kugadzikana, kunyangwe ichirwadza, iwe unofanirwa kuzviisa kune vese vamwari uye kuyambuka minwe yako kuti zvese zvishande neyakagadziridzwa yega yega, asi zvakanaka kune avo vane nguva yekutsvaga yavo yakanakisa wiki uye foramu.
Pindura kuna Alexein
Mageia yakanyorwa pamhedzisiro yekuzivisa kwayo uye kuvhurwa, pamwe nekukura kusingawanzoitika kune yakadaro-pfupi-distro. Kana iyo distro yaunotaura isina kana kuburitswa, iwe ungatarisira sei kuti ive nemhedzisiro inokanganisa pasirese yeGNU / Linux? Maonero ako anokosheswa, pane chaicho dichotomy mune zvekuisa kana kusabvisa izvi kana izvo distro, asi iko kungo ongorora wega, ndiyo yako yekuona maonero, hapana chimwezve. Mufaro!
Pindura kuna Juank
Murume uyu anofarira mageia anotaridzika. Zvinoita sei kuti ndiite chinyorwa pamusoro peiyo distros ine huremu mumakore achangopfuura, uye inosanganisira imwe inotora 1 chete ... xD uye nehafu yekuzvipembedza iyo inotanga kutumidza zita kuti geia kubvira 2010, panogadzirwa zvinoitwa nedistro kubva payakaburitswa, kwete kubva pakubata. Uye kana zvisiri, ini ndinokumbira kuisa yangu yega distro, Indio Linux, yanga iri mukubata kwemakore mashanu, asi ini handina kuiburitsa izvozvi xDD (zvakakosha here kuratidza irony?)
ajajajaj iwe unoona kuti amgeia anga ave makore mashanu…. pff senge maniulan xD..mageia haina kumberi, ine ramangwana, saka uku kushambadzira kwemahara kweiyo distro
Kana iwe uchida APT uye zvakadaro asi usinga gutsikane neiyo graphical interface, saka Linux Mint kana Debian.
Isu tinokurudzirawo kuti utore nzvimbo yedu «Distros» Chikamu: http://usemoslinux.blogspot.com/p/distros.html
Septentrion Zoster akadaro
Ini ndoda kutaura kuti ini ndaishandisa Mandriva uye mushure meMageia. Chokwadi ndechekuti kwemwedzi ingangoita 9 ndakashanda zvakakwana naMageia. Nehurombo, pamwe nekuvandudzwa kwavo, ivo vaigadzira matambudziko akakomba kwazvo mumasaiti, vhidhiyo uye mp3 odhiraivha odhiraivho. Saka vaive vachishatisa chinhu chakatanga zvakanaka. Kune rimwe divi, nharaunda yeMageia Latina ikirabhu izere nevanhu vanozvitutumadza vasingape rubatsiro. Ndicho chikonzero nei Mandriva kana Mageia vasingafanirwe kutaurwa pano. Iwo ari ma distros ayo anowedzera kuumba mamwe matambudziko kupfuura mabhenefiti. Uye kana iwe usinga tarise Internet kune dambudziko iro kushandiswa kweiyi distro kwakakonzerwa nemambure. Uye nharaunda inongo ganhurira ivo pachavo kuti "hahaha haina kunyanya kuti ndinorasa kunze ma network kana kuti haina kuziva zvigadzirwa uye qt inokonzeresa matambudziko neodhiyo kana vhidhiyo" PAMWE CHETE CHINONYANISA KUNA KUNYANYA KUKONZESA KURI KUKONZESA MATAMBUDZIKO.
Pindura kuna Septentrion Zoster
Ini ndinobvumirana naRamon, ngatitaurei nezvaDebian, amai vemazhinji ma distros ...
Zvakajeka uye zvipfupi.
Iwo makomendi anongori echipiri bato kuda. 🙂
Pa 23/07/2012 13:28 PM, «Disqus» akanyora kuti:
Ini ndoda kujekesa akati wandei nyaya, kunyanya nekuverenga zvirevo nemaonero, izvo zvakagadzira zvakanaka kusahadzika:
1- Chinyorwa ichi chaienda kunosanganisira mamwe ma distros pakutanga, asi sezvo yaive nguva yekuendesa mabasa uye zvimwe zvinhu mu facu, isu takamisa iwo ma distros eEMAI MOMENT. Sekutaura kwaPablo, pakutanga anojekesa izvo zvisipo uye kuti chingangoita chikamu chechipiri chinonyorwa nevaya vasipo distros, isu tinongokumbira moyo murefu 😛
2- Nei makore mashanu chete apfuura uyezve? Nekuti isu takatanga kufunga kuti iyi nguva yaizoratidza mamiriro azvino ema distros aya uye nemabatiro avakaita nyika yeGNU / Linux. Kuferefetwa kwaigona kunge kwakaitwa nemakore apfuura, zvisinei ruzivo rwacho rwaiwanzoshomeka uye posvo yaizowedzerwa zvakanyanya
3- Mandriva inosanganisirwa nekuti kunyangwe mamiriro ayo azvino, ZVISATI ZVAMHANYA MAI MOMENT YOKUDZORA. Mageia ndiye "mutsivi" wayo, uye nepo isina vashandisi vazhinji, kukosha kwayo kwaive kwakanyanya nekuda kwekubudirira kwazvino uye hukama hwayo hwakareba neMandriva.
4- Linux Mint is transcendent distro senge Ubuntu. Muchinyorwa, HAKUNA KUNYANYA KUTI MINTI YAKADZIDZIRA UBUNTU MUUSER QUOTA, asi kuti muna 2011 it «inotsiva Ubuntu mune chinzvimbo chemunhu peji maonero e
Kuparadzanisa, kupupurira kuwedzera kukurumbira kweMint. Kuzivikanwa kwedistro hakuna kufanana nenhamba yevashandisi: distro inogona kuve inozivikanwa nekuda kwekutaurwa kunoitwa mumablog, mapeji ewebhu, ongororo, nekuda kwekuburitswa kwevashandisi mumaforamu, kuburikidza nemazano, uye zviuru zveimwe nzira. , hazvireve chete pamubhadharo wekushandisa. Ini handisi mushandisi weArCH, asi ini ndinoona kuti inozivikanwa nekuti ndeimwe yeanonyanya kutaurwa maristos mune akawanda akasarudzika Linux midhiya, senge iyi blog 🙂 Chiyero chekushandisa pakati peimwe distro uye imwe inguva yekudenga uye handifunge ichakwanisa kupfupikiswa, zvirinani munguva pfupi. Nekudaro, ini ndinoonesa kuti mumaforamu akati wandei ndaona zvakajairwa uye zvakadzokororwa zvirevo zve "Ndiri kuedza Linux Mint nekuti ini ndaive mushandisi weUbuntu uye izvozvi handizvifarire nekuda kwekubatanidzwa kweUbatana", uye izvi zvinosimbisa izvozvo pane tsika yekubva kuUbuntu kuenda kuMint, uye izvo zvinogadzira, muchidimbu, "ruzha" rwunoitwa neMint nhasi. Kana mumwe nemumwe achidudzira kuti Mint kana Ubuntu iri kunyanya kana kushomeka kupfuura shamwari yake, iko kwatova kuongororwa wega kweumwe neumwe.
5- Debian yaizoverengerwa mune ino ongororo, asi hapana ruzivo rwakawanda rwakawanikwa, saka zvakagadziriswa kuvhara chinyorwa nezvanga zviripo. Hongu, ndiyo "amai" distro yevamwe vavo vakanyorwa pano uye inokodzera kuve muchikamu chechipiri chechinyorwa chino, usazvidya moyo.
6- Ini ndakatanga kushandisa Linux neUbuntu, ipapo ini ndakachinjira kuLinux Mint uye parizvino kuwedzera kuMint ini ndinoshandisawo Fedora uye OpenSUSE. Kwenguva pfupi ndakaedzawo Mageia. Ini ndoziva kubva pane ruzivo kuti yega yega ine zvayakanakira nezvayakaipira, uye pfungwa yakajairika yaive yekuti haifanire kunge iri chinzvimbo, kuti hapana WINNER, asi zvirinani ongorora zvakaitwa nedistro yega yega mumakore ano uye uone kuti zvakakanganisa sei yavo zvazvino mamiriro .
7- Nekuremekedza Ubuntu, iri yakanaka distro, kuti kunyangwe ini ndisingashandise, handirambe kufarirwa kana simba kana kukosha kwazvinazvo. Muchinyorwa iwe unonyatso kuona kuti kunyangwe masangano akasiyana anosarudza kuishandisa kana kuishandisa uye nemabatirwo ayo akasiyana nezvigadzirwa zvakasiyana (Ubuntu TV, Ubuntu yeApple, nezvimwewo).
8- Izvo zvakanyorwa zviri mumaonero angu uye chero munhu anogona kusawirirana, imwe neimwe ine chiono chaicho nemaonero 😀
Nekuda kwekunyorwa kwenyaya iyi, zvinogona kunzi Mint yakapfuura Ubuntu maererano nekushandisa uye mukurumbira, asi… Chii chavari kutsigira kutaura kuti Linux Mint ndiyo ine mukurumbira kana ine mugove wepamusoro? Nekuda kweiyo Distrowatch stats? Icho chiri icho chokwadi uye pamwe ndakanganisa, handioni icho chero kupi, ini ndinopokana zvechokwadi kuti Linux Mint yakapfuura Ubuntu mukushandisa quota, ingo tarisa nhau senge Steam, nhau kubva kune vagadziri vari kubheja kupa Ubuntu mu pre- kuisirwa, nhau nezveUbuntu TV, pakati pevamwe.
Iyo Linux Mint yakanaka uye kuti ivo vanoziva mafambiro ekufambisa kukwezva vashandisi vazhinji vasingade kuziva chero chinhu neshanduko dzakakura idzo nzvimbo huru dzedesktop dzakapa, ini handina chokwadi nazvo (ona kuti kunyangwe Mint's Firefox inounza mucherechedzo. kuDistrowatch), asi ini ndinofunga kuti haina zvakawanda kugona kuenzanisa Ubuntu zvirinani maererano nenhamba yevashandisi uye mukurumbira.
Chaizvoizvo. MuUbuntu yakauya muna 11.04. Zvamunotaura zvaive muUbuntu Netbook Edition, hazvina kufanana neUbuntu (iyo vhezheni huru).
Francisco Verdeja akadaro
Chaizvoizvo chaive muna 10.10 senge vhezheni yeNetbook, yaitaridzika kunge iri nani pane iyo vhezheni yakabuda muUbuntu 11.04, asi yaive isina kugadzikana pakushandisa Mutter, iyo panguva iyoyo yaive isina kugadzikana, inorema uye inononoka maneja windows
Pindura Francisco Verdeja
Kuti ndive OpenSUSE mushandisi, ndinofanira kutaura kuti kune vese vakaongororwa ndiyo iyo yawave wakanyanya kupfupisa xD
Zvakanaka, murume, nekuti zita racho haritauri nezveavo vane huremu hwakawanda panguva ino chaiyo, asi avo vakave nayo mumakore mashanu apfuura.
Hehe… ndima yekutanga inojekesa kuti sei.
Yakanga isipo kuisimbisa uye zvinoonekwa kuti vazhinji havana kuiverenga. Ikozvino zvinoonekwa yero.
Ndizvozvo! Ini ndatogadzirisa iko kukanganisa.
Tarisa ndima yekutanga yechinyorwa. Ikoko zvinova pachena kuti sei varasika. Ivo zvirokwazvo vanouya muchikamu chechipiri. Izvo hazvigoneke kuita chinyorwa pane ZVESE distros pamwechete.
Mune chinyorwa chinojekeswa kuti nei Arch asiriye, iye Debian mumwe chete.
Debian inosuwa chaizvo asi chokwadi ndechekuti zvirinani pane ese iwo anofanirwa kuve aripo uye kuti ivo vanozivikanwa chaizvo kunze kweLinux
Kubatana hakuna kuburitswa pa10.04 yaive pa11.04
uye Arch? Kubva ikozvino zvichienda mberi ndinovabvisa kubva kubhukumaki bhaa.
Nei uchiisa arch kana iri rolling system, uchaita sei kuongorora distro zvinoenderana nenguva yayo kana ikasamboburitsa yakakodzera vhezheni?
Ini ndinofunga Debian isipo kubva pane ino runyorwa, zvinopfuura chero chinhu nekuti ndicho chigadziko uye mudzi (uye mune yakakwira%) yemamwe ma distros ari pano seUbuntu kana Mint.
Uye sezvo ini ndanga ndisina kubatanidzwa muLinux kwenguva yakareba, kubvira 2009 hapana chimwe chinhu, ini handinzwisise kuti Madriva (uye iyo Mageia forogo) inotaurwa sei nekuti parizvino havana huremu hwakawanda munharaunda, kunyangwe ini ndichiziva izvozvo vanga vainayo panguva iyoyo, ikozvino havana.
Zvisinei, chinyorwa chakanaka kwazvo uye rakapfupisa basa.
Ruzivo rwakanaka. Nei Arch isipo? Zvakaoma kugadzirisa, asi zvakanyanyisa kugadzikana, zvinoshanda.
Chii chakaitika kuna Arch? Ko zvakadii nemisi pamberi pa 2007? redhat ndeyekare senge debian… ..
Iko kune Mageia uye hakuna Arch, yakakwana ... / s
Ini ndakamirira iyo info nezve gentoo, sabayon, debian, LMDE.
Linux Mint 13 Xfce inowanikwa
Iva neGnome 2 menyu muXfce pasina kuisa chero chinhu